AMP zvino anobatana mune vadzidzisi zvuru gumi dzakashandiswa uye michina mitsva vachivimbisa kugadzirisa dambudziko Bitcoin kuti scalability. Vamwe mikana vanosanganisira SegWit, Schnorr vakasaina, uye Mheni Network.
The AMP dzakati kuti unoshanda pamusoro Bitcoin Mheni Network. Mheni Network chinhu decentralized hurongwa runovabvumira Vatori ezvidzidzo trustless micropayment migero kuuraya, kure-blockchain, mumwe kana vakawanda mubhadharo kwema.
Mipata iyi gara kunze Bitcoin blockchain. Kwema kutora nzvimbo pakati migero. Upon kupera, kwema aya zvitange, sezvo rimwe mutengapwe, kuti blockchain.
Segwit nderimwe inokosha Bitcoin optimizer kuti anogona kuvandudza Bitcoin kuti scalability uye kuderedza Bitcoin kuti mutengapwe yechikoro. SegWit ndinoda kubatsira kuvandudza Mheni Network kuti mutengapwe malleability.
Sezvo SegWit kwakaita activation muna August 2016, Developers vave kuramba kusanganisa SegWit kupinda Bitcoin wallets, uye exchanges vanoverengeka kare pakutevedzera SegWit. Most ichangopfuura, musi February 5th, 2018, Coinbase vakazivisa kuti rokupedzisira kuidzwa danho atanga uye kuti Segwit achava dziripo Coinbase vatengi vari shoma dzinotevera.
AMP nderimwe zano kuti, pamwe Mheni Network, anovimbisa kukubatsira kugadzirisa scalability nyaya Bitcoin raMwari. Bitcoin iyi uye vanoita kutarisira kuti AMP achagamuchira rutsigiro kubva zvose crypto wekuongorora uye tofambira mberi zvinobudirira.
Unofunga Atomic Multi-Nzira kubhadhara pamusoro Mheni Network achaita tinzwe Bitcoin kutengeserana yechikoro uye aimhanya? Ngatizive ari pasi apa.
Previous Post:Havasi miners zvose vachapona mutengo rutapudzo bitcoin
Next Post:Sei kurambidzwa crypto pakushambadzira musi Facebook kuchabatsira indasitiri
Kubvumbi 24, 2018 pa 6:48 AM